Banyere Anyị - Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd. bụ nnukwu onye na-emepụta carbon na China, nwere ihe karịrị afọ 15 na-emepụta ahụmịhe, nwere ike inye ihe carbon na ngwaahịa n'ọtụtụ ebe. Anyị na-emepụta Carbon Additives (CPC & GPC) na grad electrodes na UHP / HP / RP ọkwa.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mgbalị, ngwaahịa nke Qifeng ụlọ ọrụ e ukwuu ghọtara site anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ndị ahịa na miri emi imekọ ihe ọnụ. Nzube anyị: ozugbo imekọ ihe ọnụ, ndụ nkwado! Ugbu a anyị ụlọ ọrụ na-tumadi aku calcined mmanụ ala coke echetakwa nile di iche iche nke urughuru size na graphite electrode dayameta si 75mm na 1272mm mmepụta na ahịa, anyị ala sọlfọ na-ajụ sọlfọ calcined mmanụ ala coke site anyị ọkachamara echekwa tumadi ji na aluminum tupu butere anode ihe , casting na steelmaking carburant, titanium dioxide mmepụta, lithium batrị cathode ihe onwunwe, chemical ụlọ ọrụ, wdg
Anyị factory nwere mbụ-klas carbon mmepụta akụrụngwa, pụrụ ịdabere na nkà na ụzụ, nlezianya management na zuru okè nnyocha usoro, anyị zuru okè ngwaahịa quality ule laabu nwere ike hụ na ọ bụla Mbupu niile kwekọọ na ihe ndị ahịa chọrọ, anyị nwere nnukwu lọjistik otu, hụ nchekwa nke mbupu ọ bụla bịara n'ọdụ ụgbọ mmiri. Qifeng na-agbanwe agbanwe ụkpụrụ nduzi nke nkwa ma ogo yana oke yana ọrụ dị mma. Karịrị 10,000 tọn ngwaahịa na ikike mbupụ kwa ọnwa, anyị nọkwa n'ihu n'ihu na ụlọ ọrụ nkeonwe nke ụlọ.
Anyị ji obi anyị niile na-atụ anya na-akwado ndị enyi niile gburugburu ụwa na-ewu Qifeng n'ime otu enterprise na ihe ọzọ dị mkpa, amaja aka, na-aga n'ihu ọhụrụ na ume mmepe.